Uru nke mmeghachi omume bonded Silicon CARBIDE
Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide (RBSC, ma ọ bụ SiSiC) na-enye oké ekweghị ekwe / abrasion eguzogide ma na pụtara ìhè chemical kwụsie ike ike ike gburugburu. Silicon Carbide bụ a sịntetik ihe onwunwe na-egosipụta elu arụmọrụ e ji mara ndị gụnyere:
l Ezigbo chemical eguzogide.
The ike nke RBSC bụ fọrọ nke nta 50% karịrị nke kasị nitride bonded sịlịkọn carbides. RBSC bụ magburu onwe corrosion-eguzogide ma na antioxidation seramiiki .. Ọ pụrụ kpụrụ n'ime a dịgasị iche iche nke desulpurization nozulu (FGD).
l Ezigbo wear na mmetụta ndị na-eguzogide .
Ọ bụ n'ọtụtụ kasị elu nke ukwuu abrasion eguzogide seramiiki technology. RBSiC nwere nnukwu ekweghị ekwe na-eru nso na nke diamond. Ezubere maka ojiji na ngwa maka nnukwu shapes ebe refractory akara ule nke sịlịkọn carbide na-egosi abrasive wear ma ọ bụ mmebi si mmetụta nke nnukwu ahụ. Eguzogide ọgwụ kpọmkwem impingement nke ìhè ahụ dị ka nke ọma dị ka mmetụta na eji abrasion nke arọ solids nwere slurries. Ọ pụrụ kpụrụ n'ime a dịgasị iche iche nke shapes, gụnyere cone na uwe shapes, nakwa dị ka ihe mgbagwoju engineered iberibe mere maka akụrụngwa aka na nhazi nke ngwaọrụ.
l Ezigbo thermal ujo eguzogide.
Mmeghachi omume bonded sịlịkọn carbide mmiri enye ohere pụrụ thermal ujo na-eguzogide ma n'adịghị omenala egbuke, ha onwe-ha na ikpokọta ala njupụta na elu n'ibu ike.
l High ike (uru ike n'oge okpomọkụ).
Mmeghachi omume bonded Silicon carbide retains ọtụtụ n'ime ya n'ibu ike na elu okpomọkụ na ngosi oke ala etoju nke creep, na-eme ya na-akpa oke maka ibu-amị ngwa ke nso 1300ºC ka 1650ºC (2400ºC ka 3000ºF).
Nka na ụzụ Data-mpempe akwụkwọ
Nka na ụzụ Datasheet
Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide
Modulus nke ekwedo
Confficient nke kwes mgbasa
K 1 10 ˉ6
Mons 'ekweghị ekwe ọnụ ọgụgụ (rigidity)
Max na-arụ ọrụ temparature
Ụlọ ọrụ Case N'ihi Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide:
Power Generation, Mining, Chemical, Petrochemical, n'ekwú ọkụ, Machinery n'ichepụta ụlọ ọrụ, mineral & Metallurgy na na.
Otú ọ dị, n'adịghị ka ọla na ha alloys, idụhe etozu ụlọ ọrụ arụmọrụ ibiere sịlịkọn carbide. Na a dịgasị iche iche nke ikwọ, densities, n'ichepụta usoro na ụlọ ọrụ ahụmahụ, sịlịkọn carbide mmiri nwere ike dị iche nke ukwuu na-anọgidesi, nakwa dị ka n'ibu na chemical Njirimara. Your oke nke soplaya na-ekpebi larịị na àgwà nke ihe onwunwe gị na-enweta.